Unyana wam unovakalelo olukhulu | Oomama Namhlanje
Unyana wam unovakalelo olukhulu
UAlicia tomero | 18/05/2021 10:00 | Ukuhlaziywa ukuba 18/05/2021 10:03 | Iingcebiso, Intsapho
Bonke abantwana bahle kwaye babaluleke kakhulu, kodwa mhlawumbi umntwana wakho unomdla kakhulu kwaye phila ubomi bakho ngamandla amakhulu. Kungenxa yoko le nto ezi ntlobo zabantwana kufuneka ujonge iimvakalelo ezilungileyo ngothando olukhulu. Ngenxa yoku, abazali mabagcine uthando lwethu engqondweni ukuze bakhule benqabiseke ngakumbi.
Bonke abantu bahambisa iimvakalelo ukuya kwinqanaba elincinci okanye elingaphezulu, ke ngoko, umntwana wakho unako yiba novakalelo ngakumbi kwaye oko akuthethi ukuba iyalandula. Akukho mfuneko yokucinga ukuba yahlukile kwezinye, kuba ekuhambeni kwexesha sinokuyizalisa ngezizathu ezifanelekileyo zokuba zikhule iimvakalelo zayo.
1 Uziphatha njani umntwana o-hypersensitive?
2 Iziphumo zexesha elide kunye nexesha elide kunye nendlela yokulawula ukuba umntwana wakho unovakalelo oluninzi
Uziphatha njani umntwana o-hypersensitive?
Abantwana abanovakalelo kufuneka ucinge ngaphambi kokuthatha amanyatheloBakhetha ukubonakalisa ngaphambi kokwenza into ebenza bazive bekhathazekile. Kuyinyani ebenza babonakale kwabanye abantwana, basengabantwana abaqhelekileyo, kodwa kukho ezinye izinto ezibenza babe novakalelo kwaye kufuneka sincede boyise:
Uninzi lwezinto abazithethayo okanye abazenzayo kubo zibachaphazela kakhulu. Le nyaniso yenzeka kuba amandla abo okuziva enamandla ngakumbi kunesiqhelo. Iimvakalelo zabo kunye neemvakalelo zabo zinamandla kangangokuba uninzi lweziganeko kunye nemiboniso iyabongamela.
Ixesha elingaphezulu bayaphanda ngakumbi kunjalo ndingafuni ukuziva ungonwabanga kwiindawo ezininzi. Abathandi ukwabelana ngezihlandlo zemihla ngemihla nabanye, ababanga kolunye usapho kunye nabahlobo, okanye benza izinto zokuzonwabisa ezibalulekileyo xa kufikwa kumba wokunxiba. Bayala iimpahla ezixineneyo, iilebheli ezivelayo, uburhabaxa bamalaphu athile ...
Zinovakalelo kakhulu, kodwa kwangaxeshanye zingabantu abanothando kakhulu, bafuna uthando oluninzi nothando. Ukongeza, babonisa inkqubo evuthiweyo ebenza babonakale, beziva beqonda ngakumbi kwaye unovelwano kwabanye.
Baziphuhlisile zonke izivamvo ngovakalelo ngakumbi. Amakha, imibala kunye neencasa zibaxekileyo kwaye zibenza bahambelane namaxesha kunye namava abephila. Amandla akho e-intuition aphezulu kakhulu Kwaye bayazi xa beyithanda into okanye bengayithandi, banikwa amandla okuba bathembe okanye babe nobuganga bokwenza izindululo ezintsha.
Amandla amakhulu abanakho kukuba bayile kakhuluUkuba aba bantwana bakhula phakathi kosapho olubakhathaleleyo kwaye lubahloniphayo, banokuphuhlisa ubuchule obukhulu bobugcisa.
Hypersensitivity nayo inokufunyanwa kwiintsana. Ingabonwa xa besabela kutshintsho ekukhanyeni nakubushushu ngobuntununtunu ngakumbi kwaye njengoko bekhula banokuqala ukuchaza ngaphandle kwamathandabuzo ukuthanda kwabo ukutya, ivumba elimnandi okanye iimpahla ezibenza bangakhululeki. Uya kuqaphela ukuba ziyothuswa ngokulula zizandi ezivakalayo, okanye ezo uninzi lwezinto ebezivuseleleka ziyabacaphukisa, zinikezele kwiinyembezi.
Iziphumo zexesha elide kunye nexesha elide kunye nendlela yokulawula ukuba umntwana wakho unovakalelo oluninzi
Ukugcina imfundo elungileyo kunokuba nzimaAbanye abazali bayayichasa indlela abantwana babo abaziphethe ngayo kuba bekholelwa ukuba bakrwada, kwaye bayayicinezela ngokohlwaya. Uninzi lwaba bantwana lusebenzise imeko yabo yealam ngokuqina ngakumbi. Bayazikhusela ekuphepheni iinyani ezithile, balwa de kube sekupheleni, babaleka okomzuzwana okanye ubalimaze.
Abazali bathanda ukubalungisa rhoqo Impendulo yabantwana bakho isenokuhlala iyinto embi kuba bahlala belawula ngakumbi kunesiqhelo. Konke oku kukhokelela Abanyamezelani kwaye baba ndlongondlongo kwimeko enjalo, Kubonakala ngathi krwada ngokufuna ukunqanda iimeko ezingathandekiyo.
Iimpendulo zabazali eziNgekho mthethweni kunye noMboniso wokunyamezela okuncinci yenza abantwana bazive bengakhuselekanga. Banokuba nomdla omncinci kwinkqubela phambili okanye ukungabikho komdla ekufundeni nasekuguqukeni ekuhambeni kwexesha. Esona sisombululo sisiso kukuba Abazali kufuneka bazinyamezele ngakumbi iimeko ezinjalo.
Sukuwaphepha amaxesha abacaphukisayoKuyimfuneko ukuba ubazise kancinci kancinci ngokuzithemba kunye nokuqiqa, ukuze bayamkele ngovuyo. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngemfundo, ungafunda "Ufundisa njani ngokuzithemba nangokhuseleko".
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Intsapho » Unyana wam unovakalelo olukhulu
Ungalubhiyozela njani usuku lweMyuziyam yaMazwe ngaMazwe nosapho lwakho
Uxinzelelo lwabantwana, imeko ekhulayo